स्वास्थ्य-जीवनशैली | Samacharpati स्वास्थ्य-जीवनशैली – Page 222 – Samacharpati
काठमाडौँ, १७ जेठ । हाम्रो नेपाली समाजमा योगलाई एक आध्यात्मिक प्रक्रिया पनि मानिन्छ, जसमा शरीर, मन र आत्मालाई एकत्रित गरिन्छ । सजिलो अर्थमा योग त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा हामी शरीर, मन र आत्मालाई सकरात्मक तरिकाले एकसाथ समावेश गर्छौं, अध्यात्मको प्राप्तीका लागि एक दोस्रोसँग जोड्छौं । योग मनमा रहेका विकार हटाई चेतनाको बोध गराउने विज्ञान मानिन्छ। योगको […]
उमेर ढल्कदै गएपछि खानपान र स्वास्थ्यमा खास ध्यान दिनैपर्छ । भनिन्छ नि, किशोरवयमा ढुंगा पनि पचाउन सकिन्छ । तर, जति जति उमेर ढल्कदै जान्छ, उत्तिनै हाम्रो शरीरको कार्य क्षमता कमजोर जान्छ । पाचन यन्त्र पनि उस्तै रहँदैन । खासगरी ३० बर्ष पार गरेपछि हामीले आफ्नो शारीरिक क्षमता गुमाउँदै जान्छौं । हुन त यो सबैको हकमा […]
वर्षा लागेको छ । यतिबेला बनजंगलमा च्याउ, निगुरो पाइन्छ । कतिपयले जंगलबाट खोजेरै तरकारीको छाक टार्ने गर्छन् । कतिपयले निगुरो, च्याउ बेचेर पैसाको जोहो पनि गर्छन् । निगुरो रोप्न पर्दैन । बनजंगलमा आफै पलाउँछ । यो उन्यु प्रजातिको घाँस हो । पहाड र तराई सबैतिरको जंगलमा निगुरो पाइन्छ । तर, यसको जातमा केही भिन्नता हुन्छ […]
मानिस भौतिकरुपमा स्वस्थ भएर मात्र पुग्दैन, शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ्य हुनुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्य बृहत शब्द हो जसभित्र मनरोगसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरु अट्ने गर्दछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो क्षमताको महशुस गर्न सक्ने, पूर्णरुपमा उत्पादनशील काम गर्न सक्ने, आफ्नो समुदायमा केही योगदान गर्न सक्षम हुने, आफ्नो […]
कोही मान्छे यस्ता हुन्छन् ? जसलाई अरुको हिंसा गर्न मन लाग्छ । जसलाई अरुको हत्या गर्न मन लाग्छ । जसलाई विभत्स दृश्यहरु रमाइलो लाग्छ । जसलाई अरुको क्रन्दन, पीडा, छटपटी, चिच्याहट मधुर लाग्छ । जसलाई अरुको चोट, रगत राम्रो लाग्छ । के त्यस्तो कोही हुन्छ ? केही सातायता मुलुकभर हिंसाका यस्तै कुरुप घटनाहरु सतहमा आएको […]
काठमाडौं, १६ जेठ । अगरबत्ती हाम्रो दैनिक रुपमा प्रयोग हुने वस्तु हो। पूजापाठमा यो अनिवार्य चाहिन्छ। अगरबत्ती अध्यात्मको प्रतीक हो भने यसले शान्ति र सुख दर्शाउँछ। यसको मिठो सुगन्धले आनन्द महसुस गराउँछ। तर एक अध्ययनका अनुसार अगरबत्तीको धुवाँले स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्। २०१५ को एक चाइनिज अध्ययन जुन ‘स्प्रिन्जर्स जर्नल इन्भाइरनमेन्टल केमेस्ट्रिी लेटर्स’मा […]